पाथीभरा गोल्डकप: उपाधिका लागि चर्च ब्वाइज र सगरमाथा भिड्ने - TV Annapurna
क्रिकेटर विराट कोहली र अभिनेत्री अनुस्का शर्माको विवाह ईटलीमा
धनुषा १ बाट मातृका यादव विजयी, कति मत पाए ?
रौतहट क्षेत्र न ३ का निर्वाचित पदाधिकारीलाई यसरी स्वागत गरियो !
यी उम्मेदवारहरु जो सबैभन्दा धेरै मतान्तरले पराजित भए (सूचिसहित)
मधेश केन्द्रित दलहरुको जित कसरी सम्भव भयो ? विस्तृतमा
पाथीभरा गोल्डकप: उपाधिका लागि चर्च ब्वाइज र सगरमाथा भिड्ने
ताप्लेजुङ । दोस्रो पाथीभरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडौं र सगरमाथा युवा क्लब मोरङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
सेमिफाइनल चरणको अन्तिम खेलमा सशस्त्र प्रहरीको टिम दमकलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सगरमाथा टिम विजयी भयो । सशस्त्रका लागि नवीन लामा र विनोद केसीले गोल गरेका थिए । सगरमाथाका लागि भुवन बस्नेतले गोल गरेका थिए ।
चर्च ब्वाइज काठमाडौंले घरेलु टिम नव प्रयास युवा क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गर्यो । उपाधिका लागि चर्च ब्वाइज र सगरमाथाबीच सोमबार खेल हुने आयोजकले जनाएको छ । लाखे जात्राका अवसरमा जिल्ला फुटबल सङ्घको प्राविधिक सहयोग तथा लाखेजात्रा खेल सञ्चालन समितिको आयोजनामा गत साउन २२ गतेबाट प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो ।
प्रतियोगितामा १० टिमको सहभागिता रहेको छ । विजेताले ट्रफीसहित रु दुई लाख ११ हजार १११ तथा उपविजेताले रु एक लाख ११ हजार १११ प्राप्त गर्नेछ । विसं २०२९ देखि लाखेजात्राका अवसरमा बर्सेनि सो प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
हजारभन्दा बढी बाढीपीडितलाई सेनाद्वारा उद्धार
बाढी, पहिरो पीडितका लागी करिब २ करोड निकासा
यु–१५ साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक
दक्षिण एशियाली फुटबल महासंघ (साफ) को आयोजनामा हुने साफ महिला पन्ध्र वर्षमुनि (यु–१५) फुटबल प्रतियोगिताको आफ्नो...
प्रतिनिधिसभा 74 5
प्रदेश 158 10
प्रदेश 69 5
प्रतिनिधिसभा 21 0
प्रदेश 37 1
यी हुन प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम मतान्तरले पराजित हुने उम्मेदवारहरु (सूचिसहित)
बाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ दुई तिहाई बहुमत ल्यायो (सूचिसहित)
संकटकालमा सेनाले रोखेको शक्तिशाली बम दाङमा भेटियो
मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।...
काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तराई मधेश केन्द्रित दलले पुनरागमन गरेका छन् । विसं २०७० मा...